टाेखा हत्याकाण्ड : उमेश हत्याकाे २४ घण्टासम्म जीवितै थिइन् सुदीक्षा
अमेरिकाको पढाइ । उकालो चढ्दै गरेको करियर । सुरक्षासहितको कोलोनीको बसाइ । तर, एउटा रहस्यमय हत्या । गत शक्रुबार टोखा ग्रान्डी भिल्ला कोलोनीमा बस्दै आएका दम्पती उमेश केसी र सुदीक्षा गिरीको हत्या प्रकरणले अनेकौँ प्रश्न उठाएको छ ।
केसी ललितपुरकाे गोदावरीका हुन् सुदीक्षा नेपालगञ्जकी । छ वर्षअघि उनीहरूको प्रेमविवाह भएको हो । उनीहरूको हत्या प्रकरणको सही जवाफ न अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीसँग छ, न केसीका परिवारसँग नै । पेसाले केसी दम्पती इन्जिनियर हुन् । अमेरिकामा बस्दै आएका केसी दसैँ मनाउन मात्रै काठमाडौं आएका थिए ।
तर, उनको इहलीला कोलोनीभित्र रहस्यमय ढंगबाट समाप्त भयो । प्रारम्भिक अनुसन्धानले उमेशलाई उनकै श्रीमती सुदीक्षा गिरीले ढुंगाले टाउकोमा हानी हत्या गरेर आफू पनि झुण्डिएर आत्महत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ । यसरी दुवै जना मृत भेटिएपछि केसी दम्पतीको हत्या रहस्यमय बन्न पुगेको हो ।
प्रहरीको अनुसन्धानलाई बल पुग्ने गरेर आइतबार केसी दम्पतीको पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी अशोक सिंहका अनुसार, गिरीको झुण्डिएर मृत्यु भएको र केसीको टाउकोको चोटका कारण मृत्यु भएको पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएको छ ।
तर, पोस्टमार्टम रिपोर्टले थप अर्को रहस्य स्थापित गरायो । केसी र गिरीको मृत्युको अन्तर करिब २४ घण्टाको फरकमा देखायो । केसीका सहोदर दाइ हिमेश केसीका अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्टमा २४ घण्टाको अन्तरमा उनीहरूको मृत्यु भएको खुलेको छ ।
हिमेशले भने, ‘पोस्टमार्टम रिपोर्टमा भाइ उमेशको मृत्यु सुदीक्षाको भन्दा एक दिन अघि भएको खुल्यो । सुदीक्षाले नै उमेशको हत्या गरेको भए पनि एक दिनसम्म सुदीक्षा कसरी बाँचिन् ? अन्तिममा आफू पनि मर्ने अवस्थामा कसरी पुगिन् ? हाम्रो शंका यहाँ हो ।’
शुक्रबार राति प्रहरीले भिल्ला कोलोनीको ‘२४ डी’ नम्बरको घरभित्र उनीहरूको शव फेला पारेको थियो । कोलोनीभित्र छिर्न एउटै मात्र गेट छ । नयाँ मान्छे कोही कोलोनीभित्र पस्न खोजे कोलोनीको सुरक्षा दिन गेटमा खटिएका सेक्युरिटी गार्डले कोलोनीभित्र जाने मानिसको मोबाइल नम्बरदेखि सबै विवरण लिएर मात्रै प्रवेश दिने गर्छ ।
त्यस कारण पनि केसीको हत्या आन्तरिक कलहकै कारण भएको हुन सक्ने प्रहरीको विश्लेषण छ । केसीको हत्या भएको दुई दिनअघिसम्म कोलोनीमा नयाँ कुनै मानिस गएको रेकर्ड सेक्युरिटी गार्डसँग छैन ।
के होला हत्याको रहस्य ?
उमेश केसीको बिहीबार हत्या भएकाे पोस्टमार्टम रिपोर्टले पुष्टि गरेकाे छ । दाइ हिमेशका अनुसार पनि बिहीबारदेखि उनकाे परिवार र साथीभाइसँग सर्म्पक टुटेकाे थियाे ।
‘उमेश बिहीबारदेखि सम्पर्कमा थिएनन् । बुधबार भने उनको अन्तिम भेट उनका साथी अमितसँग भएको रहेछ । अमित र उमेशले वसन्तपुरको एक रेस्टुराँमा बसेर कफी पनि खाएको खुल्यो । अमितसँगको कुरा उद्धृत गर्दै हिमेशले थपे, ‘त्यो दिन उमेश तनावमै थिए । साँझ अलिक चाँडो जानुपर्छ भन्दै खासै नबोली घर गए ।’
घटनाको अनुसन्धानमा खटिएका एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार दुवै जनाको एउटै कोठामा मृत्यु भएकाले घटनाको यकिन कारण पत्ता लगाउन केही समय लाग्ने र गाह्रो हुने बताउँछन् ।
‘हामी अहिले दुवै जनाको मोबाइल फोन विश्लेषण गर्दै छौँ । त्यसका लागि मोबाइल प्रहरी प्रधान कार्यालयको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा पठाएका छौँ । त्यसबाट केही तथ्य खुल्ला,’ ती अधिकारीले भने ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानले भने उमेश र सुदीक्षाको आन्तरिक खटपटकै कारण हत्यापछि आत्महत्या भएको खुलेको महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जका प्रमुख डीएसपी रोशन खड्काको भनाइ छ । तर, मृतक केसीका दाइ हिमेश भने सुदीक्षाकी दिदी शर्मिला गिरीको भूमिकामाथि केही शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताउँछन् ।
‘सुदीक्षा र मेरो भाइको मृत्यु करिब एक दिनको अन्तरमा भएको देखिन्छ । त्यो बेला शर्मिला सुदीक्षालाई खोज्दै हाउजिङमा पुगेकी छिन्’, हिमेश भन्छन्, ‘सबैभन्दा पहिला दुवै जनाको शव देख्ने शर्मिला नै हुन् तर प्रहरीलाई किन खबर गरिएन ?’
शर्मिलाले प्रहरीलाई बताएअनुसार घरमा पुग्दा अगाडिपट्टि ढोका बन्द रहेको र पछाडिबाट हात छिराएर खोल्न मिल्ने चुकुल खोलेर उनीभित्र प्रवेश गरेकी थिइन् । कोठामा पुग्दा सुदीक्षा झुण्डिइरहेको र उमेश लडिरहेकाे देखेको प्रहरीलाई बताएकी छिन् ।
घटनाबारे भने सोही हाउजिङमा बस्दै आएका पूर्वप्रहरी उपरीक्षक (एसपी) भवीन्द्र मल्लले प्रहरीलाई जानकारी दिएका थिए ।
हप्ता दिनपछि अमेरिका जाँदै थिए उमेश
उमेश गत ७ कात्तिकमा अमेरिकाबाट तीन महिनाका लागि नेपाल आएका थिए । आएको पर्सिपल्ट अर्थात् ९ कात्तिकदेखि श्रीमतीसहित उनी ग्रान्डी भिल्ला कोलोनीमा भाडामा बसेका थिए । उमेश अमेरिकामा रहँदा श्रीमती सुदीक्षा माइतीमै बस्थिन् ।
पोस्टमार्टम रिपोर्टअनुसार सुदीक्षा गर्भवती भएको दुई महिना पुगेकाे छ । केसी तीन दिनपछि जनवरी १४ मा अमेरिका उड्ने तयारीमा थिए । त्यसका लागि उमेशले जहाजको टिकटसमेत बुकिङ गरिसकेको उनका दाइ हिमेशले जानकारी दिए ।
घटनाको दुई दिनअघि उमेशले ललितपुरस्थित बीएण्डबी अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षणसमेत गरेको खुलेको छ । उनले किन परीक्षण गरेका रहेछन्, त्यसबारे पनि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस २७, २०७७, १९:०३:००